Sea Sick: Is Cruising Still a Happy Business? | Cruise Industry News
Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Hawaii Travel News • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • LGBTQ • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Marary an-dranomasina: Mbola orinasa tsara ve ny fitsangantsanganana?
Aogositra 23, 2020
Novambra 23, 2020
Indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo: vonona ny hanomboka fitsangantsanganana an-tsambo ny mpanjifa tsara fitetezana
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Marary an-dranomasina: Mbola orinasa tsara ve ny fitsangantsanganana?
Ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo alohan'ny COVID-19 dia nahazoana vola mitentina 134 miliara dolara amin'ny fivezivezena sy fizahan-tany ka nahatonga ny Cruise Lines International Association (CLIA) handoko ny ho avy maloka. Talohan'ny COVID-19 io.
Talohan'ny COVID-19 dia efa ho 351 tapitrisa ny lahatsoratra niaraka tamin'ny tag #travel tao amin'ny Instagram navoakan'ny mpivahiny sambatra. Ireo mpandeha dia nanohana ny fandaharan'asa ara-pahasalamana, anisan'izany ny bara oksizenina, ny safidin'ny menio ara-pahasalamana ary ny fotoana fanatanjahan-tena. Noraisina tsara ny kilasy fandrahoan-tsakafo sy ny fiakarana. Na dia malaza amin'ny sehatry ny fitsangantsanganana an-tsambo aza ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-dranomasina, dia nanapa-kevitra ny indostria fa ny asany miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia nanampy tamin'ny fitehirizana ireo vakoka sy nampihena ny dian-tongotr'izy ireo. Mihabetsaka ny vehivavy mandehandeha ary ny mari-pahaizana femista dia tafiditra ao anaty zotra. Ny mpivahiny irery koa dia tsena fitomboan'ny indostria, nihanitombo fatratra mihoatra ny zokiny / matotra matetika.
Alohan'ny COVID-19 isan-taona dia olona maherin'ny 30 tapitrisa no mandany ny fotoanany sy ny volany amin'ireo sambo fitsangantsanganana miisa 272 mahery izay mpikambana ao amin'ny CLIA. Talohan'ny COVID-19, ny indostria dia nanohana asa 1,108,676 misolo tena $ 45 miliara amin'ny karama sy karama, miteraka $ 134 miliara eran-tany (2017) ary ny CLIA dia naminavina ny ho avy tsy ho ela ho an'ny indostria mahita ny fitomboan'ny haino aman-jery sosialy sy ny famerenana amin'ny laoniny, manamarika fa valo amin'ny folo voamarina amin'ny CLIA Mpandraharaha mpitsangatsangana dia nanantena ny fitomboan'ny sambo fitsangantsanganana ho an'ny 2020.
Lohateny: Sakafo Petri
Na dia talohan'ny COVID-19 aza, ireo bilaogera, mpanoratra gazety sy gazety, masoivohon'ny governemanta ary matihanina amin'ny fitsaboana / fahasalamana dia nitatitra tamin-kafanam-po sy mazava momba ny mety hisian'ny vonjy taitra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana mandritra ny sambo iray; na izany aza, tsy nahasakana olona marobe tsy hanolotra ny carte de crédit sy debit hataony hidina anaty sambo.
Na ny COVID-19 aza dia tsy mpanakana. Ny governemanta, ny andrim-panabeazana, ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka, ary koa ny matihanina amin'ny fitsaboana sy ny fahasalamana dia miresaka ny loza ateraky ny sambo fitsangantsanganana ary ny loza mitatao amin'ny mpandeha sy ny ekipa; na izany aza misy antsipiriany sy mampidi-doza amin'ny vaovao manolotra fampitandremana anatiny sy iraisam-pirenena, ny olona manerantany dia miandry fatratra ny fitsangantsanganana an-tsambo hiditra ao amin'ny tsenan'ny dia.
Tatitra COVID-19 vao haingana avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) no namaritra fa ny isan'ny tranga eran-tany dia nitatitra fa hatramin'ny 20 aogositra 2020, dia totalin'ny tranga 22 728,255 793,810 no voamarina manerantany, ary 1 no maty. Tamin'ny 2020 Aogositra XNUMX, ireo sambo fitsangantsanganana dia nitatitra tranga 22,415 tamin'ny COVID-19, maty 789.
Araka ny Center for Disease Control (CDC), ny tontolon'ny sambo fitsangantsanganana dia tonga lafatra amin'ny fihanaky ny aretina. Ny porofo ara-tsiansa amin'izao fotoana izao dia manondro ny zava-misy fa ny sambo dia miteraka risika bebe kokoa amin'ny fifindrana COVID-19 noho ny tontolo hafa noho ny:
Betsaka ny hakitroky ny mponina an-tsambo (matetika no be mponina noho ny tanàna na ny toe-piainana hafa)
Fiainana sy fiasan'ny ekipa (efitrano akaiky amin'ny tontolo voafefy amin'ny faritra izay saika tsy azo atao ny manalavitra ny fiaraha-monina)
Mpandeha tsy misy simptika fa voan'ny virus miparitaka amin'ny fireneny amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana tsy hitan'ny sambo
Fiparitahana tampoka ny viriosy eo amin'ny ekipa avy amin'ny dia iray mankany amin'ny iray hafa sy amin'ireo vondrom-piarahamonina manerantany
Ny olona 65+ atahorana kokoa hisy vokany ratsy avy amin'ny COVID-19, tsena kendrena lehibe ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana
Fitaovana fitsaboana voafetra
Inona no nitranga
Hatramin'ny volana martsa 2020, ny valanaretina lehibe dia mifandray amin'ny sambo fitsangantsanganana telo ary misy fifandraisana amin'ny fitsangantsanganana fanampiny manerana an'i Etazonia. Ny fandefasana dia notaterina tamin'ny dia an-tsambo maro avy amin'ny sambo ka hatrany amin'ny sambo, nisy fiantraikany tamin'ny ekipa sy mpandeha.
Na dia ny fampitana lehibe voalohany an'ny COVID-19 aza dia nomena an'i Wuhan, Sina, ny fandavana izany ary avy eo ny valin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny filoha amerikana ankehitriny, Donald Trump, ary ny tsy firaharahiany voalohany ary avy eo ny valinteny malemy avy amin'ny ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay nahafahan'ny viriosy nihetsiketsika ary niely haingana tamin'ny firenena sy faritany 187.
Ny Diamond Princess dia nandrakitra ny cluster voalohany sy lehibe indrindra ivelan'ny tanibe Shina (quarantine ao amin'ny seranan'i Yokohama, Japan) tamin'ny 3 febroary 2020. Tamin'ny 6 martsa, COVID-19 dia fantatra tamin'ny Grand Princess teo amoron'ny morontsirak'i California (ny sambo dia Natokan-toerana). Tamin'ny 17 martsa, tranga COVID voamarina no hita tamin'ny sambo 25 farafaharatsiny.
Nanomboka namoaka fampitandremana No-Go ny Centre for Disease Control (CDC) ny 21 febroary ho an'i Azia atsimo atsinanana. Tamin'ny 8 martsa, ny fampitandremana dia nivelatra mba hampidirana ny fanemorana ny fitsangatsanganana an-tsambo rehetra manerantany ho an'ny olona manana toe-pahasalamana ambanin'ny tany sy / na 65+, ary tamin'ny farany, ny 17 martsa, ny CDC dia nanoro hevitra ny amin'ny tokony hanemorana ny fitsangantsanganana rehetra manerana izao tontolo izao.
Ny Princess Princess sy Grand Princess dia nanana tranga COVID-800 maherin'ny 19; Olona 10 no maty. Nanomboka tamin'ny 3 febroary 13 martsa tany Etazonia dia tranga 200 teo ho eo no voamarina tamin'ireo mpandeha an-tsambo avy amina sambo marobe mitana ny 17 isan-jaton'ny fitambarany amerikana notaterina tamin'izany. Tao amin'ny Princess Diamond dia olona 700 mahery no voan'ny aretina; Olona 14 no maty. Nanomboka ny volana febrily dia fitsangantsanganana an-tsambo iraisam-pirenena maro no voarohirohy tamin'ny tatitra momba ny tranga COVID-19, anisan'izany ny tranga 60 farafahakeliny any Etazonia avy amin'ny fitsangantsanganana an-dranon'ny Neily any Egypt.
Nanamarika ny valanaretina ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka ary nanombatombana ny amin'ireo tranga mety hitrangan'ny areti-mifindra ary nanandrana nametra ny fifindran'ny mpandeha sy ny ekipa Anisan'izany ny valiny: ny fandrindrana ireo mpandray anjara amin'ny sehatra maro, isan'izany ny sampan-draharaham-panjakana sy masoivohon'ny governemanta amerikana isan-karazany, minisitry ny fahasalamana vahiny, masoivoho vahiny, sampana fahasalamana ho an'ny fanjakana sy fanjakana, hopitaly, laboratoara ary orinasan-tsambo fitsangantsanganana.
Ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka dia niandrandra ny fampitana azy ireo mandritra ny fidinana an-tsambo sy ny fampodiana azy ireo an-tanindrazana. Ny fameperana dia misy fetra amin'ny fivezivezena ataon'ny mpandeha sy ny ekipa, ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny aretina (ao anatin'izany ny PPE ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny fanadiovana), ny famonoana otrikaretina cabins misy ahiahiana, ny fizarana vaovao, ary ny famotopotorana ireo mpitsangatsangana any Etazonia izay ahiahiana ho voan'ny virus na tsia .
Olana lehibe indrindra: Famolavolana sambo
Ny iray amin'ireo antony marobe fa ny fanaraha-maso ny COVID-19 sy ireo aretina hafa mifindra amin'ny sambo dia sarotra sy sarotra ny mifono dia ny endrik'ilay sambo. Ny toetra izay mahatonga azy io tsy hilentika mihitsy dia mampitombo ny tahan'ny aretina azo avy amin'ny rivotra noho ny mpandeha sy ny ekipa.
Mba hiarovana ny sambo amin'ny tondra-drano, ny habaka dia mizara ho efitrano kely kely misy rivotra kely raha oharina amin'ny tontolo hafa mihidy (izany hoe trano, birao, fivarotana). Raha manomboka milentika ny sambo dia azo fehezina haingana sy akatona ny habaka mba hitazomana ny sambo; na izany aza, rehefa mihanaka ny aretin'ny fofon'aina, dia manakaiky ny toerana misy an'io karazana aretina io ny sakan'ny olona ao anatin'ireny efitrefitra tery sy tsy misy rivotra ireny, dia mamindra tontolo iainana ho an'ireo mpandeha sy ekipazy.
Ampy sa tsia
Ny tolo-kevitry ny CDC dia manome sosokevitra fa ny indostrian'ny fitsangantsanganana dia mamolavola, mampihatra ary mampandeha drafitra azo tanterahina sy hentitra mba hisorohana, hanalefaka ary hamaly ny fiparitahan'ny COVID-19, rehefa / avela hamerina izy ireo. Ny dingana dia mihazakazaka ny gamut mahazatra ankehitriny, manomboka amin'ny fanofanana, fanaraha-maso, fanandramana, fanalavirana, fitokanana ary fanokanan-tena ho fampiroboroboana ny mpiasa ara-pitsaboana, ny fisian'ny PPE, ny fanombanana eny amin'ny morontsiraka ary ny fampidirana hopitaly - hatramin'ny fampandrenesana ny governemanta eo an-toerana, ny fanjakana ary ny firenena, ary ny daholobe tompon'andraikitra ara-pahasalamana rehefa marary ny mpandeha sy / na ny ekipazy.
Fanovana azo inoana / tsy azo inoana
Mba hanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa dia tokony hanana trano ipetrahana tokantrano tokana. Ny ekipazy dia tokony hisaron-tava amin'ny fotoana rehetra, rehefa ivelan'ny cabins tsirairay. Ny tolotra sakafo dia tokony hovaina mba hanamorana ny halaviran'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fanamboarana indray ny seza fisakafoana, ny fotoana fisakafoana manahirana ary ny fisakafoana ao an-trano. Ny safidy fisakafoanan-tena dia tokony hofafana.
Na dia loharanom-bola lehibe aza ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina dia manararaotra ireo mpiasa sy mpandeha hahazo sy / na hanaparitaka aretina, noho izany dia tokony hahena ireo fotoana ireo. Ny fenitra ara-tsosialy, toy ny fifanomezan-tanana sy ny famihina dia tokony hahakivy rehefa ampirisihina ny fahalalam-pomba sy ny fitsipi-batana. Na ho an'ny mpandeha na ho an'ny ekipa, ny toeram-panasana tanana dia tokony ho feno soavona savony, lamba famaohana taratasy ary fitoeram-pako.
Na dia talohan'ny dia aza dia tokony amporisihina ny mpandeha sy ny ekipa hanafoana ny fampiasana sigara, e-sigara, fantsom-poka ary sigara tsy misy setroka satria mety hiteraka fifandraisana bebe kokoa eo amin'ny tanana sy vava mety voapoizina izany; ny fisorohana ireo vokatra ireo dia mety hampihena ny risika amin'ny aretina.
Raha marary ianao, dia tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana ireo olona voany an-tsambo ny mpandraharaha amin'ny sambo, ao anatin'izany ireo mila hopitaly. Ho an'ny fitsaboana ara-pitsaboana vonjy maika tsy misy eny an-tsambo dia ireo mpandraharaha sambo izay miara-miasa amin'ny tobim-pahasalamana eny amorontsiraka, ny fahefan'ny seranan-tsambo, ny mpiambina ny morontsiraka amerikana ary ny sampan-draharahan'ny fahasalamana eo an-toerana / eo an-toerana, araka ny takiana.
Lisitry ny fizahana mpandeha. Inona no antenaina
Ny fitaterana ara-pahasalamana mankany amin'ny tobim-pitsaboana amoron-dranomasina dia nalamina mialoha sy niaraka tamin'ny fandrindrana toerana fandraisana. - Ny olona marary dia tsy maintsy manao saron-tava mandritra ny fizotran-tsambo sy mandritra ny fitaterana
Ny mpiasan'ny escort rehetra dia tokony hanao PPE
Ny gangway dia nanadio ny mpiasa hafa rehetra mandra-pialan'ny olona marary iray
Ny lalan'ny fidinana, ny faritra mety misy loto (izany hoe ny lalantsara) koa ny lalana sy ny fitaovana ampiasaina (izany hoe seza misy kodiarana) dia tokony diovina ary diovina avy hatrany aorian'ny fidinana.
Marary an-dranomasina. Tsy misy tsy ampoizina
Na dia talohan'ny COVID-19 aza dia narary ny olona ary nisy kosa maty tany an-dranomasina. Araka ny filazan'ny biraon'ny mpitsabo any Broward County Examiner, izay tsy maintsy hitaterana olona maty amin'ny sambo fitsangantsanganana mijanona ao amin'ny Port Everglades ao Fort Lauderdale, olona 91 eo ho eo no maty tao amin'ireo sambo fitsangantsanganana tonga tao Fort Lauderdale teo anelanelan'ny 2014 sy 2017. Ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana dia mitatitra fa hatramin'ny olona telo no maty isan-kerinandro amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina manerantany, indrindra amin'ny tsipika misy mpandeha efa antitra ary maro amin'ireo maty no voan'ny aretim-po.
sary natolotry ny barfblog.com
Tamin'ny volana Janoary 2019, nitatitra ny CNN fa teo amin'ny tokotanin'ny sambo fitsangantsanganana karnavalina efatra (nianarana nandritra ny 2 taona), ny fatran'ny zana-kazo norefesina dia "azo oharina amin'ny fifantohana norefesina tany amin'ireo tanàna maloto, anisan'izany i Beijing sy Santiago" (Ryan Kennedy, Profesora mpanampy, Johns Hopkins University, Sekolin'ny fahasalamam-bahoaka Bloomberg). Ny fandrobana ny sambo dia misy singa mampidi-doza ao anatin'izany ny metaly sy ny hidrokarôma manitra polycyclic, izay maro amin'izy ireo dia misy toaka mety hiteraka homamiadana.
Tranga iray hafa tamin'ny volana Janoary 2019, The Insignia (Oceania) dia tsy nahomby ny fanaraha-maso ny fidiovana natao ho an'ny US Public Health inspektera tamin'ny 17 desambra 2018. Ny tatitra dia nahitana fa faritra be velaran'ny sakafo any an-tsambo no maloto, be vovoka ary maloto; Ny vata fampangatsiahana dia tsy namboarina tamin'ny fenitry ny fitaovan'ny sakafo ary nisy lalitra sy bibikely hafa hita tany amin'ny faritra misy ny sakafo. Nentina sy namboarina tamin'ny maripana tsy mety ny kojakoja mampidi-doza mety hitranga. Ny fanondranana rano azo sotroina dia tsy notiliana fananana ho an'ny pH na halogen ary tsy nilamina ny fitaovana fitiliana.
Tamin'ny 14 febroary 2019, nitatitra ny kapitenin'ny MSC Divina fa misy tranga olana goavana eo amin'ny gastrointestinal eny an-tsena. Tamin'ny 15 febroary 2019 ny CDC dia nitatitra fa ny Viking Star dia 36 (tamin'ny mpandeha 904) ary 1 (tamin'ny 461 ekipa) no narary ary tamin'ny 21 febroary 2019, nitatitra ny CDC fa mpandeha 83 (amin'ny 2193) ary 8 (amin'ny 905 mpikambana ao amin'ny ekipa) dia voalaza fa narary.
Tamin'ny volana martsa 2019, tao anaty sambo Silja Galaxy, tovolahy iray 50 taona no voasambotra noho ny fisalasalana fa fanolanana tamina sambo iray teo anelanelan'ny Stockholm sy Failandy. Nitatitra ny PR Newswire fa nisy mpiasa mpiasa an-tsokosoko nosorohana zava-mahadomelina, totohondry, nokapohina, nokendaina ary voaolana rehefa niasa tamin'ny Cruise Lines Norveziana ny Voahangy Norveziana M / V. Nosamborin'ny polisy ilay nanafika ary niaiky ny heloka vitany.
NCL dia notsaraina tamin'ny fitoriana fa nandritra ny taona maro talohan'ny fanolanana dia nisy tranga maro tamin'ny fanorisorenana ara-nofo sy bateria fanaovana firaisana ara-nofo, anisan'izany ny fanolanana ireo ekipazy sy mpandeha amin'ny sambo fitetezam-paritany NCL. Ny fitoriana dia nilaza fa fantatry ny NCL fa ny zava-mahadomelina fanolanana daty dia voarohirohy tamin'ny fanolanana an-keriny sambo vehivavy mpiasa sy mpandeha.
Ny CDC dia nanadihady ny bibikely 13 momba ny bibikely gastrointestinal toa an'i E Coli sy ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo norovirus raha toa ka fahita matetika ny valanaretina gripa sy ny pox. Tamin'ny volana Mey 2019, dia voamarika tamin'ny fitsangantsanganana siantifika ny kitrotro. Tamin'io taona io ihany dia tsy nahomby ny fizahana ny fidiovana karnavaly noho ny fandikan-dalàna izay nahitana «rano mangatsiaka» avy tao amin'ny ranonorana tao amin'ny tobim-pitsaboana sy ireo fitaovam-pitaterana sakafo maloto.
Ny iray amin'ireo olana maro atrehin'ireo mpandeha marary sy ny ekipa ao anaty sambo fitsangantsanganana dia ny tsy fisian'ny fanampiana kely; voafonja ara-panoharana ianao amin'ny sambo ary miankina amin'ny dokotera mpiantoka izay mandoa vola be izay tsy takatry ny ankamaroan'ny drafitry ny fiantohana ara-pahasalamana.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny dokotera sambo fitsangantsanganana dia matetika tsy manam-pahaizana manokana; ny ekipa mpitsabo dia nokaramaina hiatrika olana toy ny norovirus ary tsy azo inoana fa hanana efitrano fitsaboana vonjy maika. Voafetra ny ora fitsaboana (ie, 9 AM-Noon; 3-6 PM) ary amin'ny andro seranana dia voafetra kokoa ny ora. Mety tsy mahay miteny anglisy ny dokotera ary mety hanakantsakana ny fanampiana izany amin'ny toe-javatra sarotra.
Alohan'ny hanaovana famandrihana sy hidiranao amin'ny famandrihana fitsangantsanganana dia zahao amin'ny mpiantoka ny fahasalamanao raha toa ka misy olana ara-pahasalamana any ivelany ny fandrakofana; apetraho ny fanontaniana hoe: "Raha marary / maratra aho, ahoana ny fahitana ahy?"
Ny ankamaroan'ny mpandeha dia tsy mividy fiantohana fitsangantsanganana, raha manao izany izy ireo dia hitahiry vola an'arivony maro. Fanamarihana fampitandremana: Ny tsara indrindra dia ny fijerena ireo safidy amin'ny mpanome tolotra tsy miankina fa tsy ny fiantohana mandeha amin'ny fiantohana amin'ny fizahan-tany avy amin'ny orinasan-tsambo na ny maso ivoho.
Inona no tokony hataoko?
Voina ve? Ireo mpandeha dia tokony ho mpanadihady azy manokana ary handrakitra an'io sary io miaraka amin'ny sary (horonan-tsary) ny toerana nitrangan'ny fahalavoana sy ny fijoroana vavolombelona vavolombelona. Ny fikarakarana ara-pitsaboana an-tsambo dia tsy maintsy arahana miaraka amin'ny kopian'ny mailaka amin'ny mpisolovava manokana. Raha manana endrika fandratrana ny mpandeha ny zotra fitsangantsanganana izay manontany manokana ny zavatra mety ho nataon'ny mpandeha hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, nanolo-kevitra ireo mpisolovava fa avela ho banga ity toerana ity satria io no fomban'ny zotra fitsangantsanganana hanandrana hanome tsiny ny lozam-pifamoivoizana na ny ratra nahazo azy.
Ireo mpandeha dia mety halefa eny ambony sambo mba hitsabo tena ary amin'ny tranga sasany dia mety tsy safidy mety izany. Ireo mpandeha manana olana ara-pahasalamana lehibe dia halefa any amin'ny seranana manaraka fanampiana. Raha New Jersey ny fijanonana - mety tsy olana izany; na izany aza, raha seranan-tsambo vahiny, angamba tsia. Ireo mpandeha dia afaka mandà tsy hiala amin'ny sambo raha tsy azony antoka ny haavon'ny fitsaboana any amin'ny seranan-tsambo. Zava-dehibe ny manamarika fa amin'ny toe-javatra rehetra, ny sambo fitsangantsanganana dia hanao izay tokony hiarovany tena; tsy maintsy manao toy izany koa ny mpandeha.
Tokony hijanona ve sa handeha?
Ireo mpandeha mieritreritra ny hidina sambo amin'ny 2021 dia tokony handanjalanja ny risika sy valisoa. Misy ny dingana azon'ny tsipika fitsangantsanganana an-tsambo, anisan'izany ny fanatsarana ny rafitry ny HVAC, ny fampiasana ny lamba sy ny lamba fanoherana mikraoba (avy amin'ny sofa sy seza ka hatrany amin'ny fanamiana ekipazy), ny fibaikoana ny saron-tarehy sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina; na izany aza, tsy dia azo inoana loatra (farafaharatsiny fotoana fohy), fa hiova ny famolavolana sambo. Ny kabine kely tsy misy varavarankely sy ny rivotra miverina dia mety ho tontolo lavorary amin'ny fihanaky ny aretina. Ny COVID-19 dia tsy traikefa nahafinaritra ary afaka mitondra miaraka aminy - aretina maharitra.
Misy fomba hafa hanaovana fialantsasatra, manomboka amin'ny hofan-trano RV sy toeram-pialan-tsasatra rehetra misy hatrany amin'ny Airbnbs sy ny lasy ivelan'ny trano. Amin'izao fotoana eo amin'ny tantara izao, ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia tsy afaka manome antoka fa azo antoka ny tontolo iainana. Anjarany ny mandray fanapahan-kevitra samirery. Ny fiheverana dia tokony homena ihany koa fa ny valin'ny areti-mandringana mampidi-doza ataon'ny orinasan-tsambo dia nampisy krizy ara-toekarena manerantany. Ny hoavin'ny indostrian'ny sambo fitsangantsanganana dia tsy voafaritra. Samy manontany tena ny mpandeha sy ny mpitantana orinasa fa izay hitranga manaraka.
Manapa-kevitra ny hanao famandrihana fitsangantsanganana? Hamarino tsara fa manana fiantohana fitsangatsanganana mety ianao, izay handrakotra ny mety ho aretina sy ny lozam-pifamoivoizana ho anao sy ny fianakavianao rehetra; COVID-19 tsy manavaka.
Mijanona ho tsy ara-dalàna ny fitsangantsanganana an-tsambo any Etazonia amin'izao fotoana izao.